‘कसैले सरापेर निजी स्कुल बन्द हुने र ब्रत बसेर यिनीहरूको आयु लम्बिने हैन’ | नुवागी
‘कसैले सरापेर निजी स्कुल बन्द हुने र ब्रत बसेर यिनीहरूको आयु लम्बिने हैन’
सरकारले चाहेर निजी विद्यालय बन्द होलान्?
निजी विद्यालय बन्द गर्न सरकारको दम पुग्दैन। सरकार निजी क्षेत्रको मनोवल गिराउन लागेको छ। सरकारी विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयले कता हो कता राम्रो गरेपछि ऊ आत्तिएको छ। सरकार र यसका दानापानीबाट चलेकाहरू निजीको नूर गिराउन आनन्द मान्दछन्। त्यो सब उनीहरूले आफ्नो आत्मरक्षाका लागि गरेका हुन्। कसैले सरापेर निजी स्कुल बन्द हुने र व्रत बसेर यिनीहरूको आयु लम्बिने हैन।
यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आगामी यात्रा कसरी अघि बढ्छ?
निजी शिक्षा क्षेत्र विजयी क्षेत्र हो। यसको डाहा गर्नेहरू छन् तर हामी हतोत्साहित हुनु भएन। आफ्नो यात्रा निरन्तर अगाडी बढाउनु पर्दछ। सँगसँगै हामीलाई आलोचना गर्नेहरूका आलोचनामध्ये रचनात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै तिनलाई धन्यवाद दिँदै आफूलाई अनुकुलन गर्दै अगाडी बढ्नुपर्दछ।
यसको अर्थ निजी विद्यालयप्रति सरकारको धारणा सरासर गलत भन्ने हो?
सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। अभिभावकका आवश्यकताले निजी विद्यालयहरू संचालनमा आएका हुन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रियो भने अभिभावकले निजीमा विद्यार्थी पठाउने छैनन्। सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तरसँग निजी विद्यालयहरूको विपरित सम्बन्ध रहेको छ। यो परस्पर सम्बन्धमा सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर राम्रो वनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। राज्यको ध्यान त्यतातिर जाओस्।
त्यस्तै निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्वन्धी ऐन हाम्रो हातवाट फुत्केको छ। ऐनको तहमा अब यसलाई संशोधन गर्न सजिलो छैन र यो भ्रममा हामी कोही बस्न हुदैन्। प्रख्यात हुन र प्याव्सनिष्टको भावना जित्न कसैले वोल्दैछ भने त्यो ठग हो। सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बन्छ र बन्ने क्रममा छ। ध्यान त्यसमा जानुपर्दछ। संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रालयमा डुल्दैछ। प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा हामीले असहज महसुस गर्नुपर्ने देखेका छैनौँ। तर सिहंदरवारबाट वानेश्वरको संसद भवन हुँदै शितल निवास पुग्दा ऐनले मुहार फेरेको इतिहास छ। हामी सजगताका साथ प्रत्येक पाइला पाइलामा निगरानी गरिरहेका छौँ।
कतिपय निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरु यतिबेला आफ्नो व्यवसायिक सुरक्षाबारे चिन्तित देखिन्छन्। के वास्तवमै चिन्ताजनक अवस्थामा आइपुगेको हो निजी विद्यालय?
प्याव्सन र यसका सदस्य विद्यालयहरू नार्सिसस जस्तो मै छोरी सुन्दरी भनेर बस्न हुदैन्। फिनिक्स चराजस्तो व्यापक परिवर्तन गर्न र हुन आवश्यक छ। आज निजी विद्यालयहरूलाई प्रतिकुलता देखिएका छन्। यो ऋतु परिवर्तन जस्तै हो। प्रतिुकल मौसम आएको छ। रात पछि दिन आउँछ। रातको समयमा दिनको आचरण र जीवनपद्धतीले हुँदैन र बद्लिनुपर्दछ। तर दिन अवश्य आउँछ। सदस्यहरूमा यो चिन्तन, धैर्य र परिवर्तन अत्यावश्यक छ।
सरकारको कुनै कानून र आयोगको प्रतिवेदनले मात्र प्रतिकुलता ल्याएको हैन्। यस्ता कानून नआउँदै, आयोग नबन्दै पनि हामीसँग समस्याहरू थिए,छन् र रहिरहनेछन्। यो व्यवसायको स्वाभाविक प्रक्रिया र व्यावसायिक जीवनमा आउने चक्र नै हो। वुद्धिमत्ताका साथ यसलाई सम्हाल्नु आवश्यक रहेको छ।
ग्ल्याडस्टोनमा ८१ जनाले गरे रक्तदान